नेपालमा लगाउन सुरु जोन्सन एण्ड जोन्सन भ्याक्सिनका जान्नैपर्ने विशेषता र केही अफवाहहरु « Khasokhas Follow @khasokhasmag
अमेरिकी सहयोगमा कोभ्याक्समार्फत प्राप्त र नेपालमा साउन ४ गतेदेखि लगाउन सुरु गरिएको कोरोनाबिरुद्धको भ्याक्सिन जोन्सन एण्ड जोन्सनका केही विशेषताहरु रहेका छन् भने भ्याक्सिनबारे केही भ्रमहरु पनि फैलिएका छन् । यो भ्याक्सिन अमेरिकामा लगाउन रोक लगाइएको, भ्याक्सिन लगाएका व्यक्तिमा गम्भीर साइड इफेक्ट हुने र परीक्षणकै क्रममा रहेको लगायतका कैयन विषयमा भ्रमसमेत रहेका छन् ।
के अमेरिकामा लगाउन रोक छ ?
छैन । अहिले अमेरिकामा अहिले कोरोनाबिरुद्धको जोन्सन एण्ड जोन्सन भ्याक्सिन वितरणमा अहिले कुनै रोक लगाइएको छैन । यो अमेरिकामा प्रयोगको स्वीकृति पाएको तेश्रो भ्याक्सिन हो भने यो भ्याक्सिन अमेरिकामा झण्डै १२ मिलियनले लगाइसकेका छन् ।
यद्यपी अमेरिकामा गत अप्रिलमा यो भ्याक्सिन वितरणमा अप्रिल १३ देखि १० दिनसम्म रोक लगाइएको थियो । तर अप्रिल २३ मा उक्त रोक हटाइएको थियो । त्यसपछि पनि अमेरिकामा झण्डै ५ मिलियनले यो भ्याक्सिन लगाइसकेका छन् ।
सम्भावित दुर्लभ प्रकारको रगतका थोपा जम्ने समस्या देखिएको हुनसक्ने भन्दै यो भ्याक्सिन १० दिन वितरणमा स्थगन गरिएको थियो । यस्तो समस्या कोभिशिल्ड (आष्ट्राजेनेका) भ्याक्सिनका सन्दर्भमा पनि देखिएको थियो । तर झण्डै ८ मिलियनले भ्याक्सिन लगाउँदा जम्मा १५ जनामा मात्रै यस्तो समस्या देखिएको थियो । ५० बर्षभन्दा कम उमेरका महिलामा यस्तो समस्या देखिएको थियो । जसमध्ये ३ जनाको मृत्यु भएको थियो भने सातजना अस्पतालमा भर्ना भएका थिए ।
तर भ्याक्सिन कोरोना संक्रमणबिरुद्ध सुरक्षित र प्रभावकारी रहेको निष्कर्ष निकाल्दै अमेरिकाको एफडीए र सीडीसीले भ्याक्सिन वितरण सुचारु गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । सम्भावित जोखिमको तुलनामा फाइदा नै धेरै रहेको र फाइदाले जितेको भन्दै भ्याक्सिन वितरण सुचारु गरिएको हो ।
यद्यपी ५० बर्षभन्दा कम उमेरका महिलालाई यो भ्याक्सिन लगाउँदा भने सावधान हुन चेतावनी दिइएको छ । भ्याक्सिन लगाएपछि कम प्लेटलेस र रगत जम्नसक्ने दुर्लभ जोखिमका कारण ५० बर्षभन्दा कम उमेरका महिलाले यो भ्याक्सिन लगाउँदा विचार गर्न भनिएको छ ।
के हो न्युरोलोजिकल डिस्अर्डर ?
जोन्सन एण्ड जोन्सन भ्याक्सिन सम्बन्धित दुर्लभ न्यूरोलोजिकल डिस्अर्डर गियान बार सिन्ड्रोमबारे पनि चर्चा भइरहेको छ । अमेरिकाको खाद्य तथा औषधी प्रशासन एफडीएले यसबारे नयाँ चेतावनी जारी गरेपछि मान्छेहरु सशंकित भएका छन् । तर यो समस्या पनि अत्यन्तै कममा मात्र देखिएको छ भने भ्याक्सिनसँग सिधै जोडिएको पुष्टी भएको छैन ।
१२ मिलियन भन्दा धेरैले भ्याक्सिन लगाउँदा ९५ जनामा गम्भीर प्रकारको यस्तो केस देखिएको थियो । उनीहरु अस्पतालमा नै भर्ना हुनुपरेको थियो । यद्यपी भ्याक्सिन र गियान बार सिन्ड्रोमबारे प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापीत गर्न तथ्यांक अप्रयाप्त रहेको भन्दै एफडीएले कोरोनाबिरुद्ध जोन्सन एण्ड जोन्सन भ्याक्सिन लगाउन सिफारिस गरेको छ ।
जोन्सन एण्ड जोन्सनले पनि यस्तो सिन्ड्रोमको सम्भावना अत्यन्तै कम रहेको र रिपोर्ट गरिएका मामलाहरु पनि अत्यन्तै थोरै भएको जनाएको छ ।
जोन्सन एण्ड जोन्सन भ्याक्सिनसँग सम्बन्धित पछिल्ला केसहरुमा भने धेरै उमेरका पुरुषहरु सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको देखिएको छ ।
अमेरिकाले किन पठाएन अरु भ्याक्सिन ?
अमेरिकामा आष्ट्राजेनेका भ्याक्सिन भण्डारणमा रहेको छ । तर यो भ्याक्सिन अमेरिकामा प्रयोगका लागि स्वीकृति नपाएकाले यो भ्याक्सिन अमेरिकाले अन्य देशमा सहयोगका लागि पनि पठाएको छैन । प्रयोगका लागि स्वीकृत भइसकेपछि र त्यसका तत्थ्यांकहरु एफडीएले विश्लेषण गरेपछिमात्र आष्ट्राजेनेका भ्याक्सिन विदेशमा सहयोगका लागि पठाउने अमेरिकाले जनाएको छ ।
अमेरिकाले केही देशलाई सहयोगका लागि मोडेर्ना र फाइजर भ्याक्सिन पनि पठाएको छ । तर नेपालमा ती भ्याक्सिनहरु उचित भण्डारणको अभाव भएकाले परिचालनमा समस्या हुने भएकाले अमेरिकाले कोभ्याक्समार्फत जोन्सन एण्ड जोन्सन पठाएको हो । जोन्सन एण्ड जोन्सन भ्याक्सिन नेपालमा भण्डारणका लागि सहज रहेको छ भने परिचालनमा समेत समस्या छैन ।
फाइजर भ्याक्सिनमा उल्लेख गरिएको म्यादसम्म भण्डारण गर्नका लागि यो भ्याक्सिनलाई माइनस ६० डिग्रीदेखि माइनस ८० डिग्री सेल्सियस तापक्रमभित्रको अत्यन्तै चिसो फ्रिजरमा राख्नुपर्छ । नेपालमा यति चिसो तापक्रममा भण्डारण गर्न मिल्ने कुनै व्यवस्था छैन । यो भ्याक्सिन माइनस ७० डिग्री सेल्सियसमा राख्न सिफारिस गरिएको छ ।
नेपालमा जोन्सन एण्ड जोन्सन भ्याक्सिन वितरण अवलोकनका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरी । फोटो : अमेरिकी दूतावास काठमाडौं
नेपालमा माइनस २० डिग्री सेल्सियसभन्दा कम तापक्रममा भण्डारण गर्न सकिने कुनै व्यवस्था नभएको नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेलले खसोखासलाई जानकारी दिएका छन् ।
फाइजर भ्याक्सिन दुइसातासम्मका लागि माइनस १५ डिग्रीदेखि माइनस २५ डिग्री सेल्सियससम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ । तर सीडीसीको पछिल्लो गाइडलाइन अनुशार त्योभन्दा लामो समय उक्त तापक्रममा फाइजर भ्याक्सिन भण्डारण गर्न मिल्दैन । फाइजरको भ्याक्सिन दुईडोज २१ दिनको अन्तरमा दिनुपर्ने भएकाले अहिलेसम्म २१ दिनसम्म यो भ्याक्सिन नेपालमा भण्डारण गर्न मिल्ने कुनै व्यवस्था छैन ।
त्यस्तै मोडेर्ना भ्याक्सिन पनि नेपालमा लामोसमय भण्डारणका लागि उचित व्यवस्था देखिन्न । यो भ्याक्सिन माइनस १५ देखि माइनस ५० डिग्री सेल्सियसभित्र भण्डारण गर्नुपर्छ । नेपालमा माइनस २० डिग्री सेल्सियससम्मको तापक्रममा भण्डारण गर्नसकिने व्यवस्था रहेपनि यो भ्याकिसन सकभर माइनस २० डिग्री वा त्यो भन्दा माथि राख्न सिफारिस गरिएको छ ।
मोडर्ना भ्याक्सिन २ देखि ८ डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा ३० दिनसम्म राख्न सकिन्छ । यो तापक्रममा भ्याक्सिन राख्नसक्ने व्यवस्था नेपालले गर्नसक्छ । तर यो भ्याक्सिन दुईडोज २८ दिनको अन्तरमा दिनुपर्ने भएकाले काठमाडौंबाहिर वा दुर्गम स्थानमा भ्याक्सिन परिचालनमा भने समस्या हुनसक्छ । प्रयोगका लागि प्वाल पारिएको भ्याक्सिनको शीशी २ डिग्रीदेखि २५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा १२ घण्टासम्म राख्न सकिन्छ ।
के जोन्सन एण्ड जोन्सन परीक्षणकै क्रममा छ ?
अमेरिकामा जोन्सन एण्ड जोन्सनको भ्याक्सिनले एफडीएबाट आपतकालिन प्रयोगको स्वीकृति पाएको हो । मोडेर्ना र फाइजर भ्याक्सिनले पनि अमेरिकामा आपतकालिन प्रयोगको स्वीकृति पाएका छन् । अमेरिकामा अहिलेसम्म कोरोनाबिरुद्धका कुनै पनि भ्याक्सिनले प्रयोगको पूर्ण स्वीकृति पाएका छैनन् । छिटोमा सन् २०२२ को सुरुतिर फाइजरले पूर्ण स्वीकृति पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
आपतकालिन प्रयोगको स्वीकृति पाएका भ्याक्सिनहरु पनि परीक्षणका क्रममा रहेका भ्याक्सिन होइनन् । उनीहरुले विभिन्न चरणका क्लीनिकल परीक्षणहरुमा सफलता प्राप्त गरेपछि आपतकालिन प्रयोगको स्वीकृति दिइएको हो ।
प्रयोगको पूर्ण स्वीकृतिका लागि मोडेर्ना र फाइजरले अमेरिकाको खाद्य तथा औषधी प्रशासन समक्ष आवेदन दिइसकेका छन् । दुईमहिनाको तथ्यांकको आधारमा यी भ्याक्सिनलाई आपतकालिन प्रयोगको स्वीकृति दिइएपनि ६ महिनाको तथ्यांकको आधारमा पूर्ण स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएको हो ।
तर पूर्ण स्वीकृति अगाडि एफडीएले एकबर्षसम्मको तथ्यांक हेर्नसक्ने भएकाले यो प्रकृयाका लागि केही महिना लाग्नसक्नेछ । आगामी दिनहरुमा यी भ्याक्सिनले थप तथ्यांकहरु एफडीएलाई उपलब्ध गराउँदै जानेछन् । एफडीएका वैज्ञानिकहरुले तथ्यांकहरु हेर्नुका साथै सुरक्षा सम्बन्धि अन्य सरोकारहरुको पनि मूल्यांकन गर्नेछन् । कम्पनीले सही तरिकाले तथ्यांकहरु उपलब्ध गराएको नगराएको बारे पनि एफडीएले जाँच गर्नेछ ।
पूर्ण प्रयोगको स्वीकृति पाइसकेपछि महामारी अन्त्य भए लगत्तै र स्वास्थ्य संकट सकिए लगत्तै भ्याक्सिन बजारमा बिक्रिका लागि आउनेछ । त्यसपछि कम्पनीले आफ्नो भ्याक्सिनको विज्ञापन टेलिभिजन र अन्य संचारमाध्यममा कहिलेदेखि गर्न पाउने भन्नेपनि निर्धारण हुनेछ ।